नायक प्रदीप भए "नोभेम्बर जिन्स नेपाल" का ब्रान्ड एम्बास्टर ....(भिडियो सहित) – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentनायक प्रदीप भए “नोभेम्बर जिन्स नेपाल” का ब्रान्ड एम्बास्टर ….(भिडियो सहित)
नायक प्रदीप भए “नोभेम्बर जिन्स नेपाल” का ब्रान्ड एम्बास्टर ….(भिडियो सहित)
युवा पुस्ता माझ अत्यन्तै लोकप्रिय नायक प्रदीप खड्का अब नोभेम्बर जिन्स नेपालका ब्रान्ड एम्बास्टर भएका छन । बिगत दुई बर्ष देखी चलिरहेको यस कम्पनीमा प्रदीप आबद्द हुनुको एउटै उद्देश्य नेपाली ब्रान्ड लाई अन्तरराष्ट्रिय लेभल मा स्टाब्लिस गराउनु हो भन्ने जानकारी प्रदीप ले दिए । धेरै दिन देखी नायक प्रदीप खड्काको फेसबूक र इन्स्टाग्राम मा देखिएको आई एम नोभेम्बर लेखिएको तस्बिरले निकै चर्चा त पाएको थियो नै तर धेरैजना लाई कौतुहल को बिषय पनि भएको थियो । यो कौतुहल हिज प्रेम गीत २ को सेलिब्रेसनमा मेटियो । के हो त नोभेम्बर जिन्स नेपाल ? यो इन्टर्न्यास्नल ब्रान्ड हो ।
जेन्सले लगाउने ड्रेस हरु जस्तै: जिन्स को पाईन्ट, बेल्ट अनी टिसर्ट यस ब्रन्ड का प्रोडक्ट हरु हुन । अब नेपाली ब्रान्ड को जिन्स बिदेशमा पनी जाने भएको छ । नायक प्रदीप को चलचित्र जसरी हिट हुन्छ त्यसरी नै यो ब्रान्डको प्रोडक्ट संसार भर चम्किन्छ भन्ने टिमको विश्वाश छ । ५१ दिने सेलिब्रेसनमा प्रदीप नोभेम्बर जिन्सको पहिरनमा उपस्थित भएका थिए । नेपाली प्रोडक्ट ले बिदेशी प्रोडक्ट लाई रिप्लेस गर्न सकिन्छ भन्ने नायक प्रदीप को विश्वाश छ । नायक प्रदीप खड्का बोलिरहदा उनको बोलीमा एउटा टार्गेट देखिन्थियो त्यो टार्गेट हो नेपाल लाई अन्तरराष्ट्रिय स्तर मा चिनाउने ।
धमलाको चलचित्र “अनुराग” नगर्ने भए दीपक ले !!!
गायीका मिलन अमात्यको डिभोर्स, मिडियामा अरुको नाम जोडेर आएको नकारात्मक समाचारको खन्डन